I-China Fire Firey Assay Clay Clay Detlecable, igrafitite edubule, i-Silicon Carbide yababoneleli eManyeneyo - Xtlceramic
Inqanawa esithe tye yinqanawa eyenziwe yekomityi esetyenziswe kwiilebhu, iqale isetyenziswe kwiimvavanyo ze-alchemical. Injongo kukubamba ulwelo okanye luqinile kubushushu obuphakamileyo obushushu. Kwisinyithi inqanawa yokunyibilikisa inyibilikisi ibizwa ngokuba yintlekele. Izinto ezimbethelelekileyo zifuna ukumelana kobushushu, zomelele, kwaye akukho lula ukuphendula kwamachiza kwiqondo lobushushu. Ukubethelelwa kwemveli kwimveliso ye-ceramic, igrafu yale mihla, iPlatinam, i-Nickel, iChkelium kunye nezinye izinyithi.
Iziko Ihowuliseyili for lingavakali eziko ngexabiso elihle - XTL
Isampulu ke kufakwa kwiziko lingavakali kwi-1000 ° C. Ngoko nangoko aba oxidises ukhokelo ngoncedo lomoya inflowing ukusuka lingavakali eziko uze linyibilike kwaye bangene ngokuyinyibilikisa, eshiya ngasemva into eyaziwa njenge prill metal elinqabileyo.
Umgangatho oPhezulu weGolide eRefractory iAnealing Crucible-XTL
I-porcelain yekhemikhali ikwabizwa ngokuba yiporcelain ebonakalayo kunye neekhemikhali okanye iiseramikhi ezikhethekileyo. Icandelo eliphambili yi-45% ye-alumina kwaye enye i-silicon dioxide. Ludidi lweporcelain eqinile. Inokumelana okugqwesileyo kweekhemikhali kunye nokuxhathisa ukothuka kwe-thermal, kunye namandla aphezulu omatshini. Isetyenziswa kakhulu kwishishini lemichiza, ishishini lamayeza kunye nelebhu yeekhemikhali.
ngegolide nobucwebe linabantu Iziko emhlophe
5g / 20g / 30g / 40g / 50g / 55g / 65g / 75g laboratory ngodongwe Umlilo ceramic kulingwa ngokuyinyibilikisachina crucibles kulingwa umlilo loshishino lezemigodi.
Gem30 Gem40 Gem45 Gem50 Gem65 Fire Uvavanyo Iziko-XTL
Sibonelela ngeenkcazo eziqhelekileyo zemarike:GEM30 GEM40 GEM45 GEM50 GEM65 i-crucible fire assay crucible, ukongeza, sinokwenza ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi. Sebenzisa amaxesha ngamaxesha angama-5 okanye kunjalo, unokumelana nobushushu obuphezulu be-1350 degrees
I-Liling Xing Tai Long Special Ceramic Co., Ltd yasekwa ngo-2009 .Siyinkampani yobuchwephesha beceramic ekhethekileyo enamalungelo okungenisa kunye nokuthumela ngaphandle. Fumana ukwamkelwa yi ISO9001& ROHS.Njengomenzi onamandla ochwephesha wokuvavanywa komlilo, sine-7000 yeemitha zesikwere sokwakha umzi-mveliso omtsha kunye nomgca wemveliso ozenzekelayo.Siyimo yolawulo olungqongqo lwemveliso, ukuqinisekisa ukuba umgangatho wemveliso ngamnye.
I-ceram ye-ceram ithe cengle ineentlobo ngeentlobo zezitayile, ikakhulu i-ARC ibethekekile, i-cone ithe tye, i-cylindrical imbumbulu.Ubungakanani be-assay of they: 5g / i-5G / i-30G / i-40g / i-45g / i-50g / i-50g / i-55g / 75gSingabonelela ngeemveliso ngokwemizobo yomthengi, iisampulu kunye nemfuno yexabiso elipheleleyo.
Best selling Assaying Fire Clay Crucible | Ittl